TALOOYIN SARE OO KU SAABSAN QUUDINTA QAJAARKA EE LAGU KORIYO POLYCARBONATE - QAJAARKA KORAYA EE LAGU KORIYO
Ugu Weyn Ee Qajaarka koraya ee lagu koriyo
Thanks to unpretentity, kobaca degdega ah iyo qajaarka qallajinta ayaa wakiil ka ah dhammaan beeraha, iyo dalal badan.
Tan iyo tani waa mid ka mid ah khudaarta soo koraya oo si weyn u koraaya aqalka dhirta lagu koriyo, waa mid ka mid ah kuwa ugu horeeya ee soo gala cuntada ka dib jiilaal dheer oo aan lahayn fitamiino. Qaybta qajaar lafteeda, si ka duwan noocyada kale ee khudradda cagaaran, kuma faani karaan hanti nafaqo loogu talo galay dadka.
Si kastaba ha noqotee, way adagtahay in la qiyaaso salad badan iyo koorsooyin koowaad leh khudradan Si ay u cunaan miraha quruxda badan, casiir leh iyo dhadhan fiican oo koray, waxay u baahan yihiin in la quudiyo inta lagu jiro horumarka. Oo waxaad iyaga ku amartaa oo ku tidhaahdaa, Idinku waxaad samayseen kan doondoonaya ekaanta. Waxaan ka hadli doonaa waxyaabaha gaarka ah ee sii kordhaya iyo quudinta qajaarka ee lagu koriyo polycarbonate ee qalabkaan.
Noocyada quudinta qajaarka ee lagu koriyo: sida loo sameeyo bacriminta jadwalka
Maanta, qof kastaa wuxuu u safrayaa khudradda beeraha ee lagu koriyo kiniiniga polycarbonate. Caan ka noqoshadoodu waxay ugu wacan tahay fududaynta kulamada iyo tayada aadka u fiican ee wanaagsan ee geedaha sii kordhaya.
Gaar ahaan, awoodda ay u gudubto qadar ku filan qorraxda iyo hayn kuleylka. Intaa waxaa dheer, marka qajaarka taranta ee lagu koriyo polycarbonate, ma jirto baahi loo qabo in horay loo beeray geedo.
Markaad sii kordhiso qajaarka aqalka dhirta, waxaa muhiim ah in aaney ilaalin heerkulka saxda ah iyo qoyaanka. Nafaqada nafaqooyinka waxay lagama maarmaan u tahay horumarinta guulaha iyo midhaha. Waxaa la fuliyaa inta lagu jiro geeddi socodka oo dhan ee dhirta - laga bilaabo xilliga beerto geedo ilaa fruiting.
Milkiilaha kasta ee aqalka dhirta lagu koriyo oo uu tijaabiyo iyo qaladkiisa, isagoo adeegsanaya waayo-aragnimo iyo talo qof kale, wuxuu dooran doonaa habka ugu habboon ee bacariminta, wuxuu doorbidi doonaa nooca bacrimin iyo ikhtiyaarka codsiga. Tani waxay ku xirnaan doontaa halabuurka ciidda, kala duwanaanta beeraha, xaaladaha abuuray. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira talo soo jeedin ah in ay tahay mid macquul ah in la tixgeliyo dhammaan kuwa ka soo baxa qajaarka lagu koriyo polycarbonate.
Marka hore waxaad u baahan tahay inaad ogaato sida uu khudraddan u kobcayo inta uu kobcayo, inta lagu jiro mudadaas iyo walxaha gaarka ah ee ay u baahan tahay.
Wixii horumarin ah ee horumarinta qajaar, saddex item waa lagama maarmaan:
Ma taqaanaa? Potassium, nitrogen iyo fosfooraska ayaa ku jira qajaar ah saamiga soo socda: 3: 2: 1.
Inta lagu jiro xilli sii kordhaya, ugu muhiimsan ee qajaar ah waa nitrogen. Inta lagu jiro korniinka uu u baahan yahay potassium. Oo marka caleemaha cusub soo muuqdaan iyo bilowga fruiting, qudaar ayaa u baahan quudin dheeraad ah. nitrogen. Inta lagu jiro xilliga fruiting baahida qajaar ee potassium iyo fosfooraska.
Iyada oo la raacayo baahida loo qabo dhaqan khudradeed, waxaad samayn kartaa jadwal ah quudinta qajaarka ee aqalka dhirta lagu koriyo.
Bacriminta waxaa lagu dhaqmaa saddex ilaa afar jeer, iyada oo la tixgelinayo xeerarka loo oggol yahay. Inkasta oo, haddii loo baahdo, dheeraadka ayaa laga yaabaa inay dheeraad ahaadaan, laakiin aan ka badnayn hal mar 14kii maalmoodba mar.
Quudinta ugu horeysa waxaa lagu fuliyaa ka hor ubax. Intaa waxaa dheer, noocyada kala duwan ee bacriminta waa in lagu dabaqaa dhirta dalbada. Macluumaadka ku saabsan sida qajaarka u calaamadee waxa ay ka maqan yihiin, waxaad ka akhrisan kartaa qaybta ugu dambeysa ee qodobkan. Dhanka kale, waxaan fahmi doonaa nooca bacriminaha ah iyo sida loo isticmaalo si habboon loogu isticmaalo qajaarka.
Waa muhiim! Dhiroonka miraha si fiican ugama jawaabi karno nafaqooyinka. Quudinta xad dhaafka ah waa mid aan loo baahnayn qajaarka ee lagu koriyo, maadaama ay u horseedi karto dulmi ee koritaanka.
Noocyada bacriminta ee qajaarka ee lagu koriyo
Qajaar la bacrimiyo laba nooc oo Bacriminta ah:
organic (digada, dhoobada, compost, peat, iwm);
macdanta (ammonia, potash, phosphate, bacrimin micronutrient).
Variants ee Bacriminta organic
Xulashada ugu wanaagsan ee quudinta qajaarka waxay noqon doontaa xalal aqueous. Halkan waxaa ah qaababka yar ee Bacriminta dabiiciga ah.
In baaldi 10 litir oo biyo ah kala-gooyaa 0.5 litir oo mullein ah oo lagu daro 1 tbsp. Nitrofoski tartar. Ka dib markii si fiican isku qasan, ku dar 200 g ash (50 g of potassium sulfate), 0.5 g of boric acid iyo 0.3 g of sulphate manganese. Isticmaalka - 3 l / 1 sq. m Waxaa lagula talinayaa in ay qaadaan dharka sare ee noocan oo kale ah inta lagu jiro ubax iyo sameynta ugxan. Waxaa la fuliyaa 20 maalmood kaddib marka la dalbado Bacriminta ugu horeysa ee la soo saaro oo la siiyo saddex illaa afar warqadood oo geedo ah.
Ma taqaanaa? Waxa la rumaysan yahay in qajaarku aad u faa'iido badan yahay in lagu quudiyo ash alwaax (100 g / 10 l oo biyo ah). Waa la bacarin karaa waqti kasta 10kii maalmood.
Haddii aad haysato fursad aad ku diyaariso Bacriminta dabiiciga ah, markaa bacriminta saddexaad iyo afraad ayaa sidoo kale lagu fulin karaa iyadoo la isticmaalayo arrin organic: xaashida shimbiraha ama mullein. Marka saddexaad, waxaa lagu talinayaa in la bacrimiyo, ka dib markii la sugayo laba toddobaad kadib markii labaad. Ciidda waa in lagu waraabiyaa wejiga soo socda: 2.5 Art. Doodwad qaaddo qasi ku ah 10 litir oo biyo ah. Isticmaalka - 8 l / 1 jibbaaran. m: Halabadan ayaa loo isticmaalaa quudinta soo socda.
Wixii waraabinta dhirta waxaa sidoo kale loo isticmaalaa biyo. digaaggu (1:15), digada (1: 6), digada (1: 8). Intaa waxaa dheer, dalbo infusions cawska cagaaran (1: 5). Humus waxaa laga codsadaa qalalan.
Faleebo cawska cagaaran waxaa loo diyaarin karaa sida soo socota: 1 kg ee dhirta la jajabiyey ee quinoa, plantain, nettle ku shub 12 litir oo biyo kulul, ku adkeyso for saddex maalmood. Kahor isticmaalka, cadaadiska. Isticmaal waraabinta sariiraha. Isticmaalka - 2-3 litir / 1 jibbaaran. m. Isticmaal iyo geedo kale.
Ma aha mid aad u caan ah ee beerta, laakiin waxtar leh quudinta qajaarka ee lagu koriyo oo khamiir leh. Nidaamkani wuxuu kuu ogolaanayaa inaad gaarto dhalid ka wanaagsan. Bacriminta A waxaa si fudud loo diyaariyey: 100 g oo khamiir ah ayaa kala diri jiray 10 litir oo biyo ah. Faleebo waa in la cuno hal maalin. Isku dariddan dhirta ayaa ku waraabisay xididada.
Bacriminta macdanta ee qajaarka lagu koriyo
Bacriminta macdanta ee maqnaanshaha ee organic waa in la isticmaalo marka ugu horeysa qudaarta quudinta ka dib markii laga beerto ee lagu koriyo ah, kaas oo la fuliyaa marka geedo siin doonaa saddex ama afar caleemo. Diyaarso sidan: 20 g of superphosphate double, 15-20 g of potassium sulfate (10-15 g of chloride potassium), 10-15 g of ammonium nitrate. Xalkan waa ku filan si ay u quudiyaan 10-15 sprouts.
Laga soo bilaabo xeryaha kale ee macdanta, ka badan tahay waxaa suurtogal ah in bacriminta qajaarka ee lagu koriyo, soo socda ayaa lagu talinayaa:
1. Marka hore quudinta:
1 tbsp. qaaddo HOL, 60 g of superphosphate lagu qasi jiray baaldi 10 litir oo biyo ah;
5 g of ammophos in ay ku kala firdhaan on ciidda iyo furo;
10 g oo ah amooniyam, 10 g of superphosphate, 10 g of potassium ku shub 10 litir oo biyo ah.
2. Wixii quudinta labaad:
20 g oo ah amooniyam oo potassium, 30 g of ammonium nitrate, 40 g of superphosphate;
3. Quudinta saddexaad:
15-20 g oo kiimiko ah oo kiimiko ah oo lagu qasi karo 10 litir oo biyo ah;
50 g oo ah HOL ku shub 10 litir oo biyo ah;
4. Quudinta afraad:
28-30 g of baking soda kala diri 10 litir oo biyo ah.
Sidaa darteed, iyadoo ku saleysan talooyinka, waxaad samayn kartaa hab qiyaas ah oo qajaarka ah ee qajaarka ah ee aqalka dhirta lagu koriyo, taas oo u ekaan doonta sidan:
Quudinta 1aad - ka hor ubax, marka geedo siiyey caleemaha ugu horeysay - Bacriminta organic ama macdanta, qani ku ah nitrogen;
Quudinta 2aad - inta lagu guda jiro abuuritaanka ugxan iyo bilowga ubax (laba illaa saddex toddobaad ka dib markii hore) - Bacriminta dabiiciga ah (marka laga reebo maqaarka kiimikada, macdanta waxaa loo isticmaalaa qadar yar oo nitrogen ah iyo kaararka potassium);
Talooyinka lagu taliyey ee macdanta ka hor inta aan la dubin: amooniyam - 5-10 g; superphosphate - 20 g; potassium sulfate - 10 g halkii 10 litir oo biyo ah.
Quudinta 3aad - muddada yar ee fruiting (aan ka horeyn laba toddobaad ka dib markii hore) - potash, Bacriminta fosfate, iyo Bacriminta nitrogen leh ee dheeriga ah ee baaruud;
Dharka 4aad - inta lagu jiro muddada fruiting (14 maalmood ka dib saddexaad) - leh Bacriminta potassium iyo fosfate.
Qiyaasaha lagu taliyey ee macdanta inta lagu guda jiro fruiting: amooniyam - 15-20 g; superphosphate - 20 g; potassium sulfate - 20 g halkii 10 litir oo biyo ah.
Waa muhiim! Bacriminta waxaa lagu fuliyaa iyada oo lala socdo waraabka. Cucumber ayaa si fiican u dillaacday ka dib markii waraabiyo ama roob.
Noocyada qajaarka quudinta ee lagu koriyo
Habka loo sameeyo quudinta ayaa loo qaybiyaa:
Markaad samaynayso qorshahaaga gaarka ah, waxa, mudadaas iyo sida loo quudiyo qajaarka, waxaa muhiim ah in lagu daro nafaqada foliarta - taas oo lagu buufinayo caleemaha leh maaddooyin wax ku ool ah. Nidaamkan waxaa loo isticmaalaa sida walxaha la diyaariyay, oo lagu iibsaday dukaamo khaas ah, oo la karsado gacmahooda.
Halkaan waxaa ah cuntooyinka qaarkood ee dharka dhirta:
10 g oo ah superphosphate, 30 g oo ah nitrateum potassium, 1 g of boric acid, 0.4 g of manganese sulfur, 0.1 g of zinc sulphate;
50 g oo ah 1.5% xalalka urea / 10 l oo biyo ah;
1 tsp boric acid, 10-12 crystals ee kaneecada uumi kala diri ee litir oo biyo ah.
Ma taqaanaa? Haddii lagu buufiyo xal of Hure oo isku dhaf ah oo xididdada caleemaha leh cirbadaha, sida balka ama humus, waxaad ka heli kartaa karaa qajaarka fruiting muddo dheer.
Zircon, Epin, Bacriminta gaarka ah ee qajaarka waxay ku habboon tahay isku darka diyaar. 1 tbsp. Mucaarad ka mid ah walxahan waxaa lagu qasi karaa 10 litir oo biyo ah. Isticmaalka - 5 litir / 1 jibbaaran. m
Nafaqada khafiifka ah ee qajaarka daaweynta dadku waxay tilmaamaysaa ku buufinta laysku boobo. Waxay ka buuxsantaa biyo (1: 1), ku adkeyso 48 saacadood. Faleebo Tani waxay qajaar la jarjarey saddex jeer mudo toddoba cisho ah.
Faa'iidada ugu weyn ee lagu buufin karo Bacriminta waa ugu dhaqsaha badan, marka la barbardhigo dhejinta xididka, tallaabo, iyo sidoo kale khasaaro yar oo waxtar leh. Si kastaba ha ahaatee, waa inaad ogtahay in quudinta foliar - tani waa ilo dheeri ah oo nafaqo ah, ma awoodi doonaan inay si buuxda u faafiyaan dhirta iyada oo la socota waxyaabaha muhiimka ah.
Tilmaamayaasha ugu muhiimsan ee lagu sameeyo qajaarka cagaaran ee foostada ee ku yaala aqalka dhirta lagu koriyo waa la'aanta hal ama wax ka badan nafaqooyinka muhiimka ah iyo xilliga xagaaga qabooba oo leh cimilo dar dar ah oo badan iyo la'aanta qoraxda. Waxaa lagu qabtaa qadar yar yar fiidkii ama maqnaanshaha qorraxda. Ku buufin dhibco yar si siman caleemaha.
Waa muhiim! Dharka foliar ayaa marka hore lagu tijaabiyaa hal barkad qajaar ah. Haddii dhamaadka maalintaas dhaqanka la buufiyay uusan wax falcelin ah la lahayn muuqaalka, ka dibna waxaa suurtogal ah in lagu buufiyo inta hartay qajaarka.
Xirmooyinka sare ee kabaha
Waxaa lagula talinayaa in aad biyaha hoos timaadid isla markiiba ka dib roobab ama biyo fara badan oo fiidkii ama cimilada daruurta leh.
Waxaa laga yaabaa in la hirgaliyo dharka qaar ka mid ah iyo Bacriminta organic ama macdanta kaliya, iyo suurtogalka suurtogalka ah ee arrinta organic iyo macdanta, dhejinta iyo xididdada xididka.
Maxaa la sameeyaa haddii qajaarka uu bilaabo inuu ka danbeeyo horumarka, sida loo ogaado waxa uu geedka ka maqan yahay
Haddii qajaarka u baahan yahay nafaqo kasta, waxay kuu sheegi doonaan isbedelkan muuqaalkooda. Sidaas sababta keentay dhibco cagaaran iftiinka caleemaha ama huruudkooda, joojinta warshadda koritaanka, waxay noqon kartaa yaraanta magnesium ama kareemka potassium.
Sababta hoos u dhigida horumarinta qajaarka ayaa noqda yaraanta birta. Xaaladdan oo kale, caleemaha waxay helayaan midab iftiin ah, oo ku dhawaad ​​cad cad.
Cucumber soo saartaa miraha, oo u eg sida nalalka iftiinka ama isteroberi (cidhiidhiga at stem) - sidaas ayuu kuu sheegayaa isaga u baahan tahay potassium. Xaaladdan oo kale, waxaa lagula talinayaa in lagu soo wareejiyo waraabinta xal xashiish ama root iyo faytaba foosto leh xal of phosphate (1 tsp / 1 l oo biyo ah), xal aqueous of sulfate potassium.
Qajaarka, dhirbaaxada caarada iyo dhumucda dharka, qaabka koollada, calaamad ku saabsan yaraanta nitrogen. Marka dhirta nitrogen ee dhirta sidoo kale waxay noqdaan jeedal khafiif ah, caleemo yaryar, iyo miraha ayaa iftiiminaya midabka. Jeexitaanka cidhifyada waraaqaha xitaa waa suurtogal ah - mar dambe ayay hoos u dhigaan oo ay hoos udhistaan. Dhibaatadani waxay ku caawinaysaa in ay ka caawiso quudinta mullein ama arrin kale oo organic.
Sameynta qajaarkaaga "dhexda" qajaar (cidhiidhiga midhaha dhexda dhexe) waxay muujinaysaa boodbood fiiqan habeenkii iyo habeenkaba, oo biyo la qaboojiyo iyo maqnaanshaha magnesium iyo birta. Bacriminta Complex waxay kaa caawin doonaan xalinta dhibaatada.
Wax ku saabsan yaraanta calcium caddaynta dhibco huruud ah oo caleemo cagaaran ah, xakamaynta koritaanka dhirta, da'da deg dega ah ee xididka. Midhaha dhirta dhirta yaryar waa kuwo yaryar oo aan dhadhamin.
Yaraanta fosfooraska waxay saameyn doontaa caleemaha, oo marka hore helaya midab mugdi ah, ka dibna u engegay oo madow. Iskutallaab ku dhaca dhirta la il daran fosfooraska ayaa sii yareysa koritaanka.
Haddii midhaha ay bilaabaan inay dhadhamiyaan qadhaadh, waxay ka jirayaan qoyaan, iyo kordhinta waraabinta.
Marka dhirta ay u muuqdaan kuwo caafimaad qaba, si fiican u midhihiin miraha waaweyn, waxay ku koobnaan kartaa hal ama laba quudin dheeraad ah.
Haddii ay dhacdo in aad fiirsato xaqiiqda ah in muuqaalka muuqaalka qajaarka uu is bedelay, oo aan suurtagal ahayn in la go'aamiyo waxa dhabta ah ee ay ka maqan yihiin marxaladdan, waxaa lagu talinayaa in lagu dabaqo Bacriminta adag.
Cunto quudinta si joogto ah iyo si hagaagsan loo hayo ayaa si weyn u yareeya halista cudurada dhirta, kordhinta wax-soosaarkooda 10-15%, kordhinta xajmiga miraha iyo hagaajinta dhadhanka.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Qajaarka koraya ee lagu koriyo 2019